DALKAYGU WACANAA DADKIISU WANAAGSANAA DAWLADIISU WEECSANAA CODKAAGA KU CIIL BAX QORMADII (35) | Xarshinonline News
DALKAYGU WACANAA DADKIISU WANAAGSANAA DAWLADIISU WEECSANAA CODKAAGA KU CIIL BAX QORMADII (35)
Mahad Allaa leh, ILaaha i nabad geeyey dalkii aan muddada dheer ka maqnaa, dal ruuxaygu joogay oo aanan saacadna ka fikir la’aan, dad qalbigeygu la joogay. Waxaan ahaa qof ruux iyo jidhku kala maqanaa. Waxaan noqday qof dhan oo taabtay nolasha dhabta ah ee dadkeyga. Wax cusub ma arag oo dharaar iyo habeenba waan la socday dhib iyo dheef, barwaaqo iyo abaar omas ah, waan la qaybsanaayey dhacdooyinka farxad iyo murugu isagu jira. Intaan ogaa oon waxba ugu kordhin ayaan haddana si dhab ah u taabtay.
Waan ogaa samirka, nabad jaceylka, wax wada cunka dadkeyga, waan ogaa shaqo la’aanta, danyarta darxumeysan, dhalinta gidaar jiifka ah, qasriyada madhan ee buulasho hareereeyeen. Waan ogaa quruxda, bilicda, cunta wanaaga huteelada, sooryada guryaha. Waan ogaa in bilicda Maansoor ay agtaal buulasha hortiisa ah. Waan ogaa dadkeyga ku darxumeysan state house iyo dhammaan guryaha bacaha ka sameysan ee aqal Soomaligu qasrigu u yahay. Waa danyar darxumo u dhammaatya, ma haystaan daryeel noocnaba, caafimaad maa kuu, tacliin macnaheedaba ma yaqaaniin, hoyna waa u bac sumaysan. Waa dad samirkii Ayuub leh. Dedaal kuma yara, daacad wey u dhasheen. Waa se la doorshay. Waxa helay dad ay diir , muuqaal iyo magac wadaagaan, dhiig iyo walaalnimo u dheertay, ooy waliba ay u cumaamadeen, kuna noqday goofanayaal aan halka ay qabsadaan ka gu’in, aan dhergin, aan nixin aan lahayn jidh damqada iyo dareen aadminimo.
Dariiqii cagta saarnay. Waa barwaaqo iyo mahad Alle meel waliba waa cagaar, waxa se wadnaha ku qabanaaya kidhkidh iyo hubaqlayn. Waa jid aan mitirna fayoobeyn, godood iyo bacaad aan karkar lahyn, waa kantaroolada oo calanka sharafta badan kaaramada ka qaaday. Kow kuma qornaa kalmedu tawxeed, dhammaan wey goo’goan-yiihiin. Waa astaan ku tilmaamaysa tamarta xukuumadda, xataa birta kontroolku waa amba mid daxal rudhay oo taabashadeedu cudur tahay, amba waa caleen yar oo la soo jaray. Dariiqa ilaa Hargeysa waa tuulooyin dadku iska-faraxsan yahay bal se nolashooda ay ka muuqato rafaad ay wax badan qabitameen.
Waxay ahayd maalin UDUB ololaynayso. Waxa anigoon Hargeysa gaadhin i horyimid markhaati cad oo fal danbiyeed doorasho ah. Waa baabuurtii xukuumadda gaar ahaan kuwa Dekedda Berbera oo raxanraxan ah uuna hormood u yahay Agaasimaha Guud. Waxa labada dhinac laga tuurayaa jawaano qaad ah, waxa kale oo kolkii aan is-taagnay naloo sheegay inay ilaa xalay lacag qaybinayeen. Waxa amakaag igu riday sida loo qabitimay iyo habacsanaanta ummadda. Waa iska caadi..waxay ka mid tahay ereyada aad wax badan maqlayso. Waxa markiiba maankeygu sajilay cinwanka maqaalkan…Dal wacan, dad wanaagsan iyo xukuumad weecsan. Waxa xukuumaddu ka leexatay marinkii xilkeedu tilmaamaayey. Lacagta danyarta, dibjirka, geeljiraha, adhi-raaca, lo-jirka, dilalka, baalashlaha, caanodiiqda, bacadlaha, biyoolaha, timirlaha, taajirka, shaqaalaha, sheikh, shariif iyo ruux kasta oo dalkan degan iyo mid soo cago-dhigtaba laga qaaday ayaa laga dhigay mid dano gaar ah oo danbi cad ah lagu galo.
Bilicda magaaladu waa dhaawac sakaraad ku dhow. Nalku waa teel-teel, nuurkiisu waa daciif, jidad la’aan lumisa waqti badan oo shaqo, dhaqaale badan oo baabuur burbur leh, oo halis dadka dariiqa ay maraan baabuurtu ugu tegtay dhe. Biyo yaraan joogta ah, Hargeysa oo intey leegtay la ogyahay ayaa waxay leedahay biriij keliya oo isku xidha labadeeda daamood. Kii lacagta ilaa caruurta laga guray waa mid aan fari ka qodnayn, kolkaad aragtana aad xusuusan balamadii is-dabo-joogay eey Wasiiradu meel walba ka akhriyeen. Si gaar ah waxaan u xusuustaa Wasiirka Hawlaha Guud oo ku baaqay inay Wasaarad ahaan dhammayn doonaan intaan sanadkii hore dhammaan.
1. Miyaad jeceshay inaad cimrigaaga ku noolaato, ku dhasho ood ku barbaariso ubadkaaga buul bac ah, nolosha reer State-house ma tahay mid ay rabaan inay wax ka badalaan. Ma tahay wax habboon inaad mustaqbalkaaga siisato qadhiidh iyo quud maalmeed.
2. Haddaad tahay dhalinyaro shaqo la’ ma rabtaa inaad ka korto baryo, qadoodi iyo silica an rajo lahayn
3. Haddaad waxbaratay, ma rabtaa in la tixgeliyo aqoontaada, sinnaan iyo cadaalad lagugu shaqaaleeyo. Rajo-xumida badaha saaxiibadaa ku dhinteen ma rabtaa inaad ka badbaado.
4. Shaqaale dawladeed haddaad tahay, ma rabtaa inaad maskaxdaada u madaxbanaanaatid, inaad adiguu fikirkaaga u xor ah shaqada dawladdana haysid. Ma rabtaa inaad hesho mushahar kaaga filnaada duliga iyo dambiga laaluushka. Ma rabtaa inaad soo ceshoto karaamadada iyo tan qoyskaaga. Ma rabtaa inaad mushaharkaaga heshid xiligeeda.
5. Haddaad Bolis tahay amba Ciidanka ma rabtaa sharaf iyo maamuuskii ciidan lahaa, derejo garbaha kuu sudhan, direes bilicsan, badhan iyo kabo baalashaysan oo kolkaad laafyooto dhalintu ku daawato. Ma rabtaa mushahar kaa xoreeya in sida mihnadaha xun laguu kireysto.Sarkaal iyo askar leh xarumo lagu barbaariyo ubadkooda iyo agoontooda, lagu daryeelo caafimaadkooda.
6. Haddaad tahay ganacsade taajir weyn ah, bacadle iyo mid bacaad fadhiyaba, ma rabtaa ganacsi xor ah oon takoor lahayn, ma rabtaa cashuurta lagaa qaado oo dalka wax loogu qabto, adigoo hela jidad laamiyeysan, biyo aan gu’in, dhakhtaro casri ah, iyo waxbarsho ubadkaagu ka haqab beelaan.
7. Intaasba waxa ka weyn, ma rabtaa cadaalad, xoriyad af iyo mid dhaqdhaqaaq ah. Inaan xadhig iyo hanjabaad midna laguula iman muwaadin, inaan cidi ku xidhi Karin, albaabka gurigaagana lala bixi Karin, ma rabtaa in la baa’biiyo xukunka degdega ah iyo dulmigiisa. Ma rabtaa saxaafad xor ah oo idaacad iyo TV leh dalkoo dhan gaadha.
Intaas oo dhan waxaad ku gaadhi waa adiguu CODKAAGA KU CIIL BAXA. Waa adigoo Xukuumadda weecsan ku bedela xukuumad kuu adeegta. Diid laaluushka mustaqbalkaaga lagu iibsanaayo. Diid inaad kaadhka aqoonsigaaga ee muujinaaya jinsiyadaada iyo nasabkaaga inaad iibiso. U kac oo u codee KULMIYE…KUNNA UU KU SIINE AHOW KULMIYE..SIDAAD U GAADHO MUSTAQBAL IFAAYA.
Masiirka ummadda weeyee codkaaga ha khasaarin, ha la seexan, ha siin CID AAN SOO BAXAYN, oo ha soo saarin CIDDAAD KA CARARTAY…CODKA KHASAARAA WAA MID TAAGEERO U AH UDUB IYO DULMI JOOGTA AH.
← Mujaahid Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Dr Maxamed Cabdillahi Cumar waxay soo nooleeyeen saxan saxadii iyo dabayshii aqoonsiga Somaliland‏
CODKAAGA KU CIIL BAX- 15 →